Dowladaha Yurub oo adkaynaya xuduuddooda - BBC News Somali
Dowladaha Yurub oo adkaynaya xuduuddooda
25 Jannaayo 2016
Image caption Dalalka Yurub ayaa bilaabay inay baaraan baasaboorada dadka ku safraya Yurub gudaheeda.
Dowladaha Midowga Yurub ayaa doonaya inay yeeshaan awood ay waqti dheer adkeeyaan xuduuddooda ee la isaga gudbo baasaboor la'aan waddamada ku jira Schengen.
Waxay hadda awoodaan lix bilood oo kaliya inay baaraan baasaboorada, laakiin wasiirada ku kulmaya Hague ayaa sheegay in dhibaatada qaxootiga darteed loo ogolaado inay xudduudooda adkeeyaan ilaa laba sano.
Waxay waydiisteen gudiga Midow Yurub inay bilaabaan diyaarinta howsha. Shirka ayaa sidoo kale looga hadlay in la adkeeyo xuduuddaha Yurub ka baxsan, wasiirada ayaa sheegay in Midowga Yurub ay diyaar u noqoto inay taageeraan waddamada aan lahayn awood ku filan oo ay ku ilaaliyaan xuduuddooda.